Ndagadzirira Here Kuroora Kana Kuroorwa? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kachin Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quichua (Chimborazo) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Zulu
Ndagadzirira Here Kuroora Kana Kuroorwa?
Unofanira kutanga wanyatsozviongorora usati wapindura mubvunzo uyu. Somuenzaniso imbofunga zvinhu zvinotevera:
Mabatiro aunoita vamwe
Unobata sei vabereki vako, vanin’ina, vakoma, kana hanzvadzi dzako? Unombotadza kuzvidzora here paunenge uchitaura navo, zvokuti pane dzimwe nguva unombotaura mashoko akashata kana kuti okunyomba paunenge uchida kuburitsa zviri pamwoyo wako? Ko ivo vanoti kudii nezvako panyaya iyi? Mabatiro aunoita vanhu vomumhuri anoratidza mabatiro auchaita munhu waucharoorana naye.​—VaEfeso 4:31.
Une maonero akanaka here kana kuti akaipa? Uri munhu anonzwisisa here kana kuti uri chandagwinyira? Uri munhu anobhabhauka here kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka? Une mwoyo murefu here? Kudzidzira iye zvino kuva neunhu hwakanaka hunotaurwa pana VaGaratiya 5:22, 23 kuchakubatsira kuti uzova baba kana kuti amai vemba vakanaka.
Mashandisiro aunoita mari
Unoshandisa sei mari? Unogara uri muzvikwereti here? Unogona kuchengetedza basa here? Kana usingagoni, chii chinoita kuti zvidaro? Imhaka yebasa racho here? Munhu waunoshandira here? Kana kuti une unhu kana kuti zvimwe zvaunoita zvaunofanira kugadzirisa? Kana uchitadza kushandisa zvakanaka mari yako, unozozvikwanisa sei kana wava nemhuri?—1 Timoti 5:8.
Kana uri mumwe weZvapupu zvaJehovha, ndezvipi zvauri kuita kuti urambe uine ukama hwakanaka naMwari? Unoverenga Shoko raMwari zuva nezuva here, uchiparidza uye unovawo nezvaunoita here pamisangano yechiKristu? Munhu waucharoora anoda munhu akasimba panyaya dzokunamata.​—Muparidzi 4:9, 10.
Paunowedzera kunzwisisa zvauri, zvichakuitira nyore kuwana munhu anokubatsira kuti uwedzere kuita zvakanaka.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndagadzirira Here Kuroora Kana Kuroorwa?
ijwyp nyaya 16
Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 3: Chii Chiri Kunditadzisa?